သက်တန့် တစ်ခုရဲ့ ရောင်စဉ်ငြိမ်း: January 2010
လှပတဲ့ သက်တန့် ဆိုတာရှိလာမှာ
မဟုတ်ဘူး . . .။
လူကြီးမင်းအား ကြိုဆိုပါ ၏
ဓမ္မစကြာ (ပါဠိ-မြန်မာ) ...
ပဌာန်းပါဠိတော်နှင့် အရကောက်-အဓိပ္ပါယ် ...
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် (ပါဠိ-မြန်မာ) ...
အနတ္တလက္ခဏသုတ် (ပါဠိ-မြန်မာ) ...
နယ်စပ်လမ်းက ဝမ်းတထွာ ၉-ခိုင်မာကျော်ဇော-ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊...
But he suffers and there’s no compassion till t...
အပျိုမတွေ မငိုရလေအောင်.. ( ဘယ်သူကိုမှမရည်ရွယ်ပါဘူ....
နေ့ဖက်မှာ ငါးဖမ်းလှေတွေ၊ ငါးပုဇွန်လုပ်သားတေ...
နယ်စပ်လမ်းက ဝမ်းတထွာ ၁၁-ခိုင်မာကျော်ဇော ဇန်န၀ါရီ ၂...
LOVE < >
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 5:49 AM0comments
အချစ်ဆိုတာကို အတိအကျ မသိပဲနဲ့ `ငါ မင်းကို ချစ်တယ်´ လို့ ပြောနေကြတဲ့ လူတွေ အားလုံးအတွက် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဇောချွေးတွေ ပြန်နေတာလား။ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ဖြစ်နေတာလား။ ပြောဖို့ စကားတွေက ရင်ခေါင်းထဲကနေကို မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတာလား။
မင်းရဲ့ မျက်စိအောက်က အပျောက်ကို မခံနိုင်ဘူး။ တစ်ခဏလေး လက်တွဲဖြုတ်ရမှာကို သိပ်စိုးရိမ်နေတယ်။
သူက မင်းကို အနမ်းလေး ပေးတယ်။ မင်းရဲ့ လက်ကလေးကို မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ မင်း သူ့အနားမှာ ရှိနေတာလား။
အချစ်ပါလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးပြီး သူ့အနားမှာ မင်းနေပေးတာ သူ့ကို လုံးဝ မထိခိုက်စေချင်လို့ မဟုတ်လား။
သူ့ရဲ့ အကြည့်တစ်ချက်မှာ ရင်ခုန်သံ ရပ်တန့်မတတ် ဖြစ်သွားလို့ သူ့ကို ပုံအပ်လိုက်ချင်တာလား။
မင်းရဲ့ မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ မင်းရဲ့ ရင်တွင်း ခံစားချက်တွေကို သူ မြင်နိုင်ရဲ့လား။
ဒုက္ခတွေ သုခတွေနဲ့ စည်းနှောင်ထားပြီး အဲဒီ ကြီးမားတဲ့ အားတွေက မင်းတို့ နှစ်ယောက်ကို လက်တွဲညီညီ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာလား။
တခြားသူတွေကို စွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူ့ကိုပဲ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သစ္စာရှိရှိနဲ့ အတူ လက်တွဲနေသလား။
ဘယ်လောက်ထိ စွဲဆောင်အား ကောင်းသလဲဆိုရင် အချစ် မရှိဘူး ဆိုတဲ့လူတွေတောင် ခံစားကြည့်ချင်တယ်။ ရှိပြီးသား လူတွေက သူများကိုလည်း ခံစားစေချင်တယ်လေ။
You will find ur true love
You'll be blessed !!
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:47 AM0comments
နယ်စပ်လမ်းက ဝမ်းတထွာ ၁၁-ခိုင်မာကျော်ဇော ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၀
ရာဘာခြံတွေထဲမှာ လူသတ်၊ ဓားပြတိုက်၊ လုယက်၊ မုဒိမ်းကျင့်တာတွေဟာ ဆောင်းနဲ့ ဆောင်းအကုန်ကာလတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လက်သည်မပေါ်တဲ့ လူသတ်မှု၊ လုယက်မှု၊ မုဒိမ်းမှုတွေကြောင့် သေဆုံးကြ သူတွေ၊ ဘဝပျက်ကြသူတွေလည်း ရာဘာခြံတွေထဲမှာ အများကြီးရှိပါတယ် …
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် စံခလဘူရီနဲ့ ဘုရာသုံးဆူ ဒေသတဝိုက်မှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီမလပ် စိမ်းစိမ်းညို့ညို့ အုပ်အုပ်ဆိုင်း ဆိုင်းရှိနေတာက ရာဘာခြံကျယ်ကြီးတွေပါ။ ဘုရားသုံးဆူနဲ့ မဲကဆကြားက မျက်စေ့တဆုံး တမျှော်တခေါ်မြင်ရတဲ့ ရာဘာခြံကြီိးတွေထဲမှာတော့ မွန်ပြည်နယ် မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ဘီလူးကျွန်းနယ်တွေကလာ မွန်တိုင်းရင်းသား ရာဘာခြံအလုပ်သမားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေရှိပါတယ်။
သူတို့ဟာ ရာဘာခြံတွေပိုင်တဲ့ ထိုင်းသူဌေးတွေ၊ ကုပဏီတွေက နေရာချပေးတဲ့ ရာဘာခြံကျယ်ကြီးတွေထဲက မြေကွက် လပ်တွေမှာ မိသားစုအလိုက်၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရာ အစုအဖွဲ့လိုက်နေထိုင်ကြပြီး ရာဘာစေးခြစ်၊ ရာဘာစေးတွေကနေ ရာဘာပြားတွေဖြစ်အောင် ထုထောင်း၊ စက်နဲ့ကြိတ်၊ အခြောက်လှန်းတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကြပါတယ်။
မွန်လူမျိုးတွေဟာ ရာဘာခြံအလုပ်ကို သူတို့ရဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေဆီက လက်ဆင့်ကမ်း အမွေရခဲ့တာပါ။ သူတို့ထဲက တချို့ဟာ တချိန်က ရာဘာခြံပိုင်ရှင်တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ပိုင်တဲ့ ရာဘာခြံတွေကို စစ်အစိုးရက မတရားသိမ်း ယူတာ၊ ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူတာ၊ ဒေသခံ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်တာတွေကြောင့် သူတို့ပိုင်တဲ့ ရာဘာခြံတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို တချို့လည်း စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်းကြောင့် ဘိုးဘွားမိဘပိုင် ရာဘာခြံတွေကို ရောင်း ချပြီး မိသားစုအလိုက် နယ်စပ်ဒေသကို ရောက်လာကြတာပါ။
အခုတော့ သူတို့ ရာဘာခြံအလုပ်ကို ထိုင်းသူဌေးတွေ၊ ကုပဏီတွေပိုင်တဲ့ ရာဘာခြံတွေထဲမှာ ထက်ဝက်စား၊ လစား၊ နေ့စား အဆင်ပြေသလို လုပ်ကိုင်ပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ဖြေရှင်းနေကြတယ်လို့ မုဒုံနယ်ကလာတဲ့ ရာဘာခြံလုပ် သားကြီးတဦးက ပြောပါတယ်။
“ရာဘာခြံအလုပ်က ကျနော်တို့ရဲ့ မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ မွန်လူမျိုးတွေ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်တခုပဲ။ ကျနော် အရင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခြံကို ကိုယ်တိုင်ဦးစီးလုပ်ခဲ့တာ။ အခုတော့ ကျနော်ခြံ မရှိတော့ဘူး။ အစိုးရ သိမ်းလို့ကုန်ပြီ။ စားဝတ်နေရေး အခက်ခဲဖြစ်လာလို့ ကျနော်တို့ မိသားစုတွေ ထိုင်းကိုရောက်လာတာ။ ဒီမှာတော့ ရာဘာခြံအလုပ်ကို ခြံပိုင်ရှင်နဲ့ ထက်ဝက်စားလုပ်တယ်။ အခုလို ရာသီမှာ တလကို ဘတ်(၁)သောင်းခွဲလောက်တော့ ရတယ်”လို့ အသက်(၅ဝ) ကျော် အရွယ်ရှိတဲ့ ရာဘာခြံလုပ်သားကြီး တဦးက ပြောပါတယ်။
ရာဘာခြံလုပ်သားကြီးပြောတဲ့ အခုလို ရာသီဆိုတာက ဆောင်းရာသီကာလကို ပြောတာပါ။ ဆောင်းရာသီဟာ ရာဘာခြံသမားတွေ လက်ဖျားငွေသီးချိန်၊ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေ အလုပ်များပြီး ဝင်ငွေများများရတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဘာစေးဟာ မိုးအကုန်ဆောင်းအကူးနဲ့ ဆောင်းရာသီကာလတွေမှာ အထွက်များပါတယ်။ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေ လုပ်ငန်း ဂွင်ဝင်ရတဲ့အချိန်ကတော့ ရာဘာစေးတွေထွက်တဲ့ ညအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ရာဘာစေးအထွက်များတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေဟာ စောင်ထူထူခြုံပြီး အိပ်ယာထဲ ကွေးနေလို့ မရပါဘူး။ ည(၁ဝ)နာရီ၊ ည(၁၁)နာရီ ချမ်းချမ်းစီးစီး အိပ်ယာကနေ ထကြရပြီး ဘထရီမီးလုံးလေးတွေ ခေါင်းမှာတပ်၊ ဓားကောက်ကို ခါးမှာချိတ်ပြီး ရာဘာစေးခံတဲ့ ပုံးတွေကို ကိုင်ဆောင်ကာ ရာဘာခြံထဲ ဝင်ကြရပါတယ်။
ရာဘာခြံတွေထဲ ညဘက် မီးစိမ်းလေးတွေ လင်းလက်ပြီး တပင်နဲ့တပင် ကူးပြောင်းနေကြတာဟာ ပိုးစုန်းကြူးလေး တွေ ပျံဝဲနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘထရီမီးလုံးလေးတွေ ခေါင်းမှာချိတ်ထားတဲ့ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေ ရာပင်တွေတပင်ပြီး တပင် ကူးကာပြောင်းကာ ရာဘာစေး ခြစ်နေကြတာပါ။
“အစေးခြစ်ဖို့ ည(၁ဝ)နာရီကျော်တာနဲ့ ကျမတို့ အိမ်ကထွက်ရတယ်။ မနက်မိုးလင်းထဲ့အထိ တညလုံး ခြစ်တာ လက်မြန်ရင် မြန်သလို အပင် ၁ဝဝဝ ကျော်၊ ၁၂ဝဝ လောက်ပြီးတယ်။ မနက်(၇)နာရီလောက်ဆိုရင် ခြစ်ထားတဲ့ရာ အစေးတွေ ကို ပြန်စုပြီး ရာဘာပြားဖြစ်အောင် စက်နဲ့အထပ်ထပ်ကြိတ်၊ ရေအထပ်ထပ်ဆေးပြီးတော့ နေလှန်းရတယ်။ မနက် ၉ နာရီ၊ ၁ဝ နာရီကျော်လောက်ဆိုရင် ကျမတို့ အလုပ်သိမ်းပြီ”လို့ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားနဲ့ အနွေးထည်အထူကြီး ဝတ်ထားတဲ့ အမျိုး သမီးတဦိးက ပြောပါတယ်။
ခြံရှင်တွေနဲ့ ထက်ဝက်စားလုပ်ကြတဲ့ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေဟာ အခုလို ဆောင်းကာလမှာ မိသားစုထဲက ဓားကိုင် နိုင်တဲ့ အရွယ်ကစလို့ အလုပ်လုပ်နိုင်သူ မှန်သမျှ ရာဘာခြံထဲ ဆင်းကြရပါတယ်။ ဒါကလည်း မိုးတွင်းစာ စားဖို့သောက်ဖို့ရ အောင် ငွေကြို စုဆောင်းကြတာလို့ သူတို့က ဆိုပါတယ်။
“ရာဘာခြံအလုပ်က မိုးတွင်းဆိုရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ မိုးအရမ်းကြီးရင် တလလုံး ထိုင်စားပဲ။ မိသားစုများတဲ့လူ၊ အသုံး များတဲ့လူဆို အကြွေးတောင် တင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးတွင်းစာကို အခုထဲက လူကုန်လုပ်ပြီး စုဆောင်းကြတာ”လို့ ရာဘာ ခြံလုပ်သားတွေက ပြောကြပါတယ်။
ဆောင်းရာသီကာလဟာ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေ ဝင်ငွေများတဲ့ ကာလဖြစ်သလို ရာဘာခြံလုပ်သားတွေ အထူးသတိ ထားရတဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဘာခြံတွေထဲမှာ လူသတ်၊ ဓားပြတိုက်၊ လုယက်၊ မုဒိမ်းကျင့်တာတွေဟာ ဆောင်းနဲ့ ဆောင်းအကုန်ကာလတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လက်သည်မပေါ်တဲ့ လူသတ်မှု၊ လုယက်မှု၊ မုဒိမ်းမှုတွေကြောင့် သေဆုံးကြ သူတွေ၊ ဘဝပျက်ကြသူတွေလည်း ရာဘာခြံတွေထဲမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို သိနေကြတဲ့ ရာဘာခြံလုပ်သားတွေဟာ တချို့ ဇာတိရပ်ရွာတွေရှိရာကို တပ်ပြန်ခေါက်ကြ၊ တချို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ အလုပ်သစ်တွေ ပြောင်းလုပ်ကြ။ တချို့ကတော့ ရွာအပြန်လှ၊ အိမ်အပြန်လှဖို့ ရာဘာခြံတွေထဲမှာပဲ သတိရှိရှိနဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြသလို မိသားစုများသူတွေ၊ တနှစ်ပြီးတနှစ် အကြွေးတွေ အထပ်ထပ်ရစ်ပတ်ကာ ပြန်မရ၊ ပြောင်းမရ၊ ပြေးမရ ဖြစ်နေသူတွေကတော့ ရာဘာခြံတွေထဲမှာပဲ ကျိုးစားရုန်းကန် ရှင်သန်နေကြဆဲပါ။
# Posted by leoninedragon on ဇန်နဝါရီ 21, 2010 at 11:00am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:00 PM0comments
နေ့ဖက်မှာ ငါးဖမ်းလှေတွေ၊ ငါးပုဇွန်လုပ်သားတွေနဲ့ စည်ကားတဲ့ ရနောင်းမြို့ဟာ ညဘက်မှာတော့ စား သောက်ဆိုင်တွေ၊ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့တမြို့ပါ။ မြန်မာလူငယ်တွေ၊ မြန်မာငါးဖမ်းလုပ်သားတွေနဲ့ ညစဉ်ညတိုင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ရှိနေတာကတော့ ရနောင်းမြို့ဆိပ် ကမ်းရပ်ကွက်က စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆိုင်တွေဟာ မှောင်ရီပျိုးပျတာနဲ့ ရောင်စုံမီလုံးလေးတွေ လင်းလက်လာပြီး Rဇာနည်၊ ဇော်ပိုင်၊ ဝိုင်းဝိုင်း၊ ဖြိုးကြီိးစတဲ့ မြန်မာအဆိုတော်တွေရဲ့ သီးချင်းတွေလည်း တဆိုင်နဲ့တဆိုင် အပြိုင်အဆိုင် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ဘေးချင်းကပ် စီတန်းနေတဲ့ ဆိုင်တွေရဲ့အရှေ့မှာတော့ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါ၊ ပြာ ကာလာစုံ ဝတ်ဆင်၊ ချယ်သ ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဒီဆိုင်မှာ ဆိုပါ၊ ပျော်ပါ၊ စားသုံးပါလို့ ဖိတ်ခေါ်နေကြသလို ဆိုင်ရှင်တွေ၊ စားပွဲထိုး၊ သန့်ရှင်းရေး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်တဲ့ အလုပ်သမားတွေကလည်း ဧည့်သည်တွေအလာကို မျှော်ကြပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်းရပ်ကွက်က စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေကို လာရောက် ပျော်ပါး၊ စားသုံးသူတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ရေလုပ်သားတွေက အများစုဖြစ်ပါတယ်။
“ဧည့်သည်တွေက မြန်မာပြည်သားတွေများတယ်။ ထိုင်းတွေက လာတော့ လာတယ်။ နည်းတယ်။ နီနီတို့ အလုပ်က ဧည့်သည်တွေကို ကြိုဆိုဧည့်ခံရတာဆိုတော့ ဧည့်သည်လာမှ ပိုက်ဆံရတာ”
လို့ နှုတ်ခမ်းနီတွေ ရဲနေအောင် ဆိုးထားတဲ့ အသက်(၂ဝ)အရွယ်ရှိတဲ့ နီနီက ပြောပါတယ်။
ဧည့်သည်ဆိုတာက ဆိုင်တွေမှာ ဆိုကြကကြ၊ သောက်ကြစားကြ၊ ပျော်ကြပါးကြတဲ့ သူတွေကို ပြောတာပါ။ အိပ် ခန်းတွေနဲ့ တွဲဖွင့်ထားတဲ့ အဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုလာကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ နီနီတို့လို မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ပါးကြတာပါ။
ဒီလိုဧည့်သည် တယောက်လာရင် ဆိုင်ရှင်တွေက ဘတ် ၁ဝဝ၊ ၁ဝဝ ကျော်ရပြီး နီနီတို့ကတော့ ဧည့်သည် တယောက်ကို ဘတ် ၆ဝ၊ ၇ဝ ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ငွေကိုတော့ ဆိုင်ရှင်တွေက တလတခါ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်တွေ ဖြတ်တောက် တွက်ချက်ပြီးမှ နီနီတို့ကို ပေးတာပါ။ နီနီတို့လိုပဲ ကျော်ကျော်တို့ စားပွဲထိုး၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ကြော်လှော်၊ ချက်ပြုတ် အလုပ်သမားတွေလည်း ဧည့်သည်လာမှ လုပ်ခလစာ မှန်မှန်ရကြတာပါ။
“အရင်ကတော့ ကျနော်ကို တလကို စရိတ်ငြိမ်း ၁ဝဝဝ ပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကျနော်တို့ကို နေရာထိုင်းခင်း ပေးရတယ်။ အစားအသောက် ကျွေးထားရတယ်ဆိုပြီး ဧည့်သည်အလာနည်းရင် လစာမပေးတော့ဘူး။ ဧည့်သည် နည်းနည်း များများ သူတို့ကတော့ နေ့တိုင်း ဝင်ငွေရှိတယ်။ စီးပွားလည်း ဖြစ်နေကြတာပဲ” လို့ ကျော်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ရနောင်းဆိပ်ကမ်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့(၁ဝ)နှစ်ကျော်က ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ သိပ်မတွေ့ရပေမယ့် အခုအခါမှာ ဆိပ်ကမ်းရပ်ကွက်တိုင်းလိုလိုမှာ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ မှိုလိုပေါက်နေပြီး၊ နီနီတို့လို မိန်းက လေးတွေ၊ အပျော်အပါးလိုက်စားတဲ့ မြန်မာလှေထိုးသားတွေလည်း တနေ့တခြား များလာသလို ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်း တွေကလည်း ဆိုင်သေးလေးတွေက ဆိုင်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်လို့ မြန်မာတွေက ပြောကြပါတယ်။
ရနောင်းဆိပ်ကမ်းက ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေဟာ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်း ကြော်နေကြတာလို့ လည်း မြန်မာတွေက ပြောကြပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေကို အရင်းပြုပြီး ထိုင်းလူမျိုးတချို့ စီးပွားဖြစ်နေကြပေမယ့် မြန်မာ မိန်းကလေးတွေကတော့ ငွေအနည်းငယ်ရဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ခန္ထာကိုယ်ကို ရင်းနှီးနေကြရတယ်၊ မြန်မာလူငယ်လေးတွေဟာ တဝမ်းစား၊ တခါးဝတ်အတွက် သူတို့ရဲ့ လုပ်အားတွေ၊ အချိန်တွေကို ပေးဆပ်နေကြရတယ်လို့ မြန်မာတချို့က သုံးသပ်ပြော ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်အောင် မြန်မာစီးပွားရေးအကြပ်အတည်းက အဓိက တွန်းပို့နေတာလို့လည်း ရနောင်းရောက် မြန်မာတွေက ပြောကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတချို့ဟာ ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုကြောင့် ဒီလိုအလုပ်တွေကို မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်နေရသလို လူကုန်ကူး သူတွေရဲ့ ရောင်းစားခြင်းကို ခံရသူတွေ။ သူတို့လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို စားပွဲထိုး၊ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်လို့ထင်ပြီး ကြိုတင်ငွေတွေ ယူသုံးမိလို့ ဒုက္ခတွေ့နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုဒုက္ခ တွေ့ခဲ့ရသူတွေထဲမှာ ဝါဝါလည်း တယောက် အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
“အရင်ကတော့ စားပွဲထိုး၊ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်လို့ထင်ပြီး လုပ်ခဲ့တာ။ အခုတော့ တခြားအလုပ် ရှာလုပ်ဖို့လည်း မလွယ်တော့ဘူး။ ဝါဝါ ဒီအလုပ် လုပ်တာကို အိမ်ကလည်း သိသွားပြီ၊ လူတော်တော်များလည်း သိနေကြပြီ”
လို့ ဝါဝါက ပြောပါတယ်။
တဝမ်းစား တခါးဝတ်အတွက်နဲ့ ဝါဝါတို့လို ရေတိမ်မှာ နစ်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ရနောင်းမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဝါဝါတို့လို မိန်းကလေးတွေကို ဒုက္ခသံသရာထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ချုပ်ကိုင်ထားသူတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုသာကြည့်ပြီး ဒုက္ခတွင်းထဲ မရောက်ရောက်အောင် တွန်းပို့နေသူတွေ၊ ရေနစ်သူ ဝါးကူထိုးဆိုသလို ဝိုင်းဝန်း ရှုတ်ချ လက်ညှိုးထိုးနေကြသူတွေလည်း ရနောင်းမှာ အများကြီိးရှိပါတယ်။
# Posted by leoninedragon on ဇန်နဝါရီ 11, 2010 at 9:30am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 12:19 AM0comments
အပျိုမတွေ မငိုရလေအောင်.. ( ဘယ်သူကိုမှမရည်ရွယ်ပါဘူ..သိရှိအောင်အသိပေးတာပါ )
လူတွေကိုမှတစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆိုပိတောက်ဆိုပြီး လက်ထပ်သူနဲ့ချစ်သူကိုတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာဟာ
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာ အတ္တကျော်ရဲ့  စာစုလေးပါ........
# Posted by လွမ်းနောင် on ဇန်နဝါရီ 11, 2010 at 8:00pm
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:52 PM0comments
တစ်နေ့ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ခေါင်းဖြီးရင် ဆံပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းတယ် ထင်နေသလား။
ဆံပင်အဖျားတိတိပေးရင် ဆံပင်အရှည်မြန်တယ်ဆိုတာကော တကယ်ပဲလား။သင့်ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြားဖူးတဲ့အချက်တွေ မှန်ရဲ့လား။တကယ့်အမှန်တရားတွေကကောဘာလဲဆိုတာသိချင်ရင် ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဆိုပြီးမေးလ်ရောက်လာလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဆံပင်အဖျားတွေ တိတိပေးရင် ဆံပင်ရှည်နှုန်းမြန်စေသလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်အဖျားတိတိ၊ မတိတိဆံပင်အရှည်တစ်လကိုလက်မ၀က်လောက်ပိုတိုးလာလေ့ရှိပါတယ်။ နွေရာသီမှာ ဆံပင်ရှည်နှုန်း ပိုမြန်တတ်ပါတယ်။
ဆံပင်တိပေးလို့ပိုရှည်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟော်မုန်း တွေကြောင့် ပါ။ ဆံပင်တိပေးခြင်းအားဖြင့်ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်တာတွေကိုသာ ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆံပင်ကျန်းမာ လှပစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ စိတ်ဖိစီးမှုက ဆံပင်ပို ကျွတ်စေနိုင်သလား။
ဆံပင်တွေဟာအချိန်တိုင်းလိုလိုကျွတ်နေတတ်ပြီးပုံမှန်အနေနဲ့တစ်နေ့ကိုဆံပင်ပေါင်း ၅၀ မှ ၁၂၀ ချောင်းကြား ကျွတ်လေ့ရှိပါတယ်။သင့်ဘ၀အတွက် ကြီးကျယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ ( ဥပမာ - အိမ်ထောင် ပျိုကွဲခြင်း၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်း) တို့ကြောင့် အလွန်အမင်း စိတ်ဖိစီးမှုခံနေရပါက ဆံပင်ပိုကျွတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆံပင်ကျွတ်ရခြင်းရဲ့ တခြားအကြောင်းတွေကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတို့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ ပြောင်းသုံးပေးရင် ဆံပင်ပို ကျန်းမာသန်စွမ်းလာနိုင်သလား။
ဆံပင်ရှည်တွေကတော့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကိုဒီနေ့တစ်မျိုး၊နောက်နေ့တစ်မျိုးနဲ့ခဏ ခဏပြောင်းသုံးတာကို အားမပေးပါဘူး။ သင်သုံးနေတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ ( ဥပမာ - ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဗောက်ထခြင်း) ဖြစ်မှ တခြား တံဆိပ်ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။ ဗောက်ထတတ်တဲ့ သူဆိုရင်လည်းဗောက်ပျောက်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ၊ နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် တစ်မျိုးတည်းကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးသင့်ပါတယ်။
၄။ ဆံပင်ဖြူတစ်ချောင်းနှုတ်ရင် နောက်ထပ်ဆံပင်ဖြူနှစ်ချောင်း၊သုံးချောင်းအစားထိုးပေါက်လာတတ်သလား။
မဟုတ်ဘူးဆိုပင်မယ့် ဆံပင်အဖြူကို ဆွဲနုတ်တာ မကောင်းတဲ့အကျင့်ပါ။ ဆံပင်အမြစ်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးတွေဝင်လာနိုင်ကာအမာရွတ်ကျန်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ ဆံလုံးသေးပြီးပါးတဲ့ ဆံပင်ကို ဆံပင်အုံထူအောင် လုပ်လို့ရသလား။
အမြင်အားဖြင့်တော့ အုံထူတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်တော့ အုံထူတဲ့ပုံစံဖြစ်အာင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဆံပင်လိပ်တံနဲ့ အပူပေးကာ ဖွလိုက်ရင်ငါးမိနစ်အတွင်းဆံပင်အုံထူထူလေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၆။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ ဆံပင်ရဖို့ ခေါင်းလျှော်ရာမှာ နှစ်ခါပြန်လျှော်သင့်သလား။
မလိုပါဘူး၊ ဆံပင်အနှံ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ထည့်ကာ အသေအချာခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းနဲ့ သန့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
၇။ ခေါင်းလျှော်ပြီး အရမ်းအေးတဲ့ ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ရင် ဆံပင်သား တောက်ပြောင်သွားနိုင်သလား။
သင့်အနေနဲ့ အိပ်ချင်တော့ ပြေသွားပင်မယ့် ရေခဲရေနဲ့ဆံပင်သားတောက်ပြောင်တာ အဆက်အစပ်မရှိဘူးလို့သာ ဆိုပါရစေ။
၈။ ဆံပင်နှစ်ခွကွဲတာ ပျောက်ဆေးရှိသလား။
ဆံပင် နှစ်ခွကွဲတာ မမြင်ချင်ရင် ညှပ်ပစ်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဆံပင်နှစ်ခွ ကွဲပြီးသားကို ပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်နှစ်ခွမကွဲအောင် ကာကွယ်လို့တော့ရပါတယ်။
ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသာရွေးသုံးသင့်ပါတယ်။
၉။ ဆံပင် အရောင် ဆိုးခြင်းဟာ ဆံပင်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ အဓိက အကြောင်း အရင်းလား။
အခုနောက်ပိုင်း ထွက်ရှိလာတဲ့ ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေဟာ သိပ်မပြင်းတော့ တဲ့အတွက် ဆံပင်အသားကို ထင်သလောက် မပျက်စီးစေနိုင်ပါဘူး။ ဆိုးဆေးအကောင်းစားကို ရွေးသုံး ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဆံပင်ဆေးဆိုးတာ ထက်စာရင် ဖြောင့်တာတို့၊ ကောက်တာတို့ လုပ်တာက ဆံပင်ကို ပိုပျက်စီးစေပါတယ်။
၁၀။ နေ့စဉ် အကြိမ်တစ်ရာလောက် ခေါင်းဖြီးရင် ဆံပင်သန်စေနိုင်သလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်သပ်ရပ်နေအောင်ခေါင်းဖြီးသင့်ပါတယ်။ ဆံပင်သန်တာနဲ့ ဘာမီမဆိုင်ပါဘူး။ ခေါင်းအရမ်းဖြီးလွန်းမှ ဆံပင်တွေကိုအမြစ်ကနေ ဆွဲလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ဆံပင်အားတောင် နည်းသွားစေ နိုင်ပါတယ်ဟု Good Health ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:26 AM0comments
မေးလ်ထဲရောက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . . ပေးပို့သူ၊ ရေးသားသူ ကျေးဇူးပါ . . .
( ၁ ) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် ဂေါ်ဖီထုပ်
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ Brussel (ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ်)၊ ပဲပင်ပေါက်၊ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်းမက်စေ့ စားမြန်ရည်နှင့် မုန်လာဥ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်၊ အဲဒီဟင်းသီဟင်းရွက်တွေထဲက ကင်ဆာကို တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်မဲ့ ဓာတ်သဘာဝပစ္စည်းတွေ အများအပြား ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်၊ အဆိုပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲက ရရှိမယ့် အင်ဇိုင်းတွေကပဲ ကင်ဆာဖြစ်စေမယ့် ကာစီနိုဂျင်တွေကို ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
( ၂ ) မုန်လာဥ-၀ါ
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေ ဖြစ်လာတတ်မယ့် ကင်ဆာရောဂါကို မုန်လာဥ၀ါ တနေ့တလုံး
မှန်မှန်စားပေးနိုင်ရုံနဲ့ ရောဂါလျော့ပါးလာနိုင်ပါမယ်၊ မုန်လာဥ၀ါဟာ
စိတ်ပင်ပန်းမှု၊ ပန်းနာရောဂါဖြစ်မှု၊ ဖျဉ်းရောဂါစွဲမှုနဲ့ အသားအရေ
ဓာတ်ဖောက်မှုတို့ကိုပါ ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရောဂါမြင့်မားရင်လည်း
ချုံ့ပေးတတ်ပါတယ်၊ မုန်လာဥ၀ါထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Betacarotene ဓာတ်သဘာဝဟာ
သွေးထဲက ကိုလက်စထရောတွေကိုတောင် ဖိချပေးပြီး အူမကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့
သို့သော် သတိပြုဖို့မှာ ဘယ်လိုပဲ မုန်လဥ၀ါနှင့် ကာကွယ်ဖို့
ဆောင်ရွက်ပေမယ့်လည်း ဆေးလိပ် စီးကရက် တွေကို ဆက်လက်ပြီး သဲကြီးမဲကြီး
ဖွာရှိုက်နေရင်တော့ ဓာတ်သဘာဝရဲ့ ထက်မြက်တဲ့အာနိသင်ကို
( ၃ ) ငရုတ်နှင့် ငရုတ်ကောင်း
ပူစပ်ပူရှိန်းရှိလှတဲ့ ငရုတ်၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့တို့ထဲမှာ
Capsaicinလို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်သဘာဝပစ္စည်းတွေ ပါရှိပါတယ်၊ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ
ဆေးလိပ်အသောက်များမှု၊ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်မယ့် ဘေးရန်ကို ကာကွယ်ပေးတတ်ပါမယ်၊
ထို့ပြင်လည်း ပင်ပန်းမှုဗဟိုမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဖြစ်တတ်မယ့်
သဘာဝအကြောင်းတွေကိုပါ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ ပါတယ်၊ Capsaicinဓာတ်ဟာ ကိုက်ခဲမှုကို
ကာကွယ်ပေးမယ့် သဘာဝလည်း ရှိနေပါတယ်၊ ငရုတ်ကောင်းဟာ သလိပ်ပျောက်စေတယ်၊
ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် သက်သာစေတယ်၊ ပြီးတော့ သွေးထဲက ခဲကျပ်မှုတွေကိုလည်း
( ၄ ) ရှောက်၊ သံပရာ၊ အသီးအနံ
သဘာဝအင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေ မျိုးပျံ့အောင် ဆောင်ကြဉ်းနေတဲ့
ကာစီနိုဂျင်တွေကို ဖယ်ရှား နိုင်တဲ့ ဓာတ်သဘာဝတွေဟာ ရှောက်တို့၊
သံပရာတို့ထဲမှာ ပျော်ဝင်စွာ တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ Limoneneလို့ ခေါ်တဲ့
ဓာတ်သဘာဝတွေဟာ ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် အင်ဇင်းတွေကို
မြှင့်တင်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်နှင့် သံပရာတို့ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Glucarase
ဓာတ်တွေကလဲ ကင်ဆာဖွဲ့စည်းစေမယ့် အကြောင်းတွေကို အရှိန်အဟုန်နဲ့
ချေဖျက်ပေးလေ့ ရှိခဲ့တယ်၊ Limonene ဓာတ်တွေ ပျော်ဝင်နေတဲ့အထဲမှာ
တရုတ်နံနံ၊ ဖာလာ၊ ကရဝေးနှင့် စမုန်နက်တို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
( ၅ ) ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ကြက်သွန်နီAllium ကွန်ပေါင်းတွေ
ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတို့ဟာ
စူးရှတဲ့ အနံ့အရသာပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ တည်ရှိခဲ့တာဟာ တမူထူးခြားနေခဲ့ပါတယ်၊
ကြက်သွန်ဖြူနီတို့ဟာ အင်ဇိုင်းတွေကို မြင့်တင်ပေးခဲ့တာနဲ့ အမျှပဲ
ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ကာစီနိုဂျင်တွေကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ
ကြက်သွန်နီ တို့အပြင် ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ ဟင်းခတ်ကြက်သွန်မြိတ်တို့ကလည်း
ထက်မြက်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
( ၆ ) စပျစ်သီး
စပျစ်သီးထဲမှာ ကင်ဆာတိုက်ဖျက်တဲ့ အင်ဇိုင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးမယ့်
Ellagic အက်ဆစ်တွေနဲ့ ပြည့်သိပ်နေခဲ့ ပါတယ်၊ ပန်းသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီးနှင့်
ရတ်စဘယ်ရီသီးတို့ထဲမှာလည်း အသုံးဝင်လှမယ့် အက်ဆစ်တွေ ပျော်ဝင်နေပါတယ်၊
Phenol လို ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှု သဘာဝဆောင်ယူရာ လူတွေအတွက် အလွန်အဖိုးတန်
လှမယ့်ဓာတ်တွေ စပျစ်သီးထဲမှာ ပြည့်ဝနေတာကြောင့်လည်း လူကိုဒုက္ခပေးမယ့်
သွေးခဲမှုတွေကို အရည်ဖျော်ချ စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်
အဆိုးကိုလက်စထရော (LDL)တွေကို ဖြစ်ပါတယ်။
( ၇ ) ဖရဲသီ၊ သခွားသီး
ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အသီးအနှံတွေကို လေ့လာခဲ့ရာမှာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်စိမ်းတို့လို ထက်မြက်တဲ့ ဖရဲသီးတို့ သခွားသီးတို့ကိုပါ
မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်၊ ဖရဲသီး၊ သခွားသီးတို့ထဲမှာ ပြည့်ဝတဲ့ဓာတ်ကတော့
Carotenoids နှင့် Cantaloupes တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်၊ ကင်ဆာကို
တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ဓာတ်သဘာဝ ကွန်ပေါင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်၊
တရုတ်ပြည်မှာတော့ ကတိုးသခွားဟာ အသည်းရောင် ရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့်
မိန်းမသားတွေ ဓမ္မတာထိန်းညှိဖို့ရာ ကိစ္စတွေမှာ အသုံးချရမယ့်
ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတခု ဖြစ်နေပါတယ်၊ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ြေူနဲ့
ဂျင်းတို့လိုပဲ Adenosine ခေါ် သွေးခဲမှုကို အရည်ပျော်စေတဲ့ သဘာဝကောင်းတွေ
ပါဝင်နေတာကြောင့် နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ကုစားရာမှာပါ
( ၈ ) ပဲပိစပ်
ကင်ဆာဆဲလ်တွေ မျိုးပွားအောင် ပံ့ပိုးနေတဲ့ သွေးတွေကို ဖြတ်တောက်ပေးရာမှာ
ပဲပိစပ်ဟာ အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်း တခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်၊ ပဲပိစပ်ပဲတို့ထဲမှာ
Genistien ဓာတ်သဘာဝတွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့်လည်း
ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရာမှာ ထူးထူးခြားခြား အသုံးဝင်နေပါတယ်၊
ပဲပိစပ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ မတော်တဆ ကြုံဆုံလာနိုင်တတ်မယ့် ရင်သားကင်ဆာနှင့်
သားအိမ်ကင်ဆာတို့ကို စွန့်စားမှုကြီးမဖြစ်စေအောင် ဖြေလျှော့ပေးတတ်ပါမယ်၊
Genistien ဓာတ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက ထုတ်လုပ်ရာ
အီစထရိုဂျင် ဓာတ်သဘာဝတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်၊ ပဲပိစပ်ကို
အဲဒီဟော်မုန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရယူနိုင် ပါမယ်၊ တိုဟူး၊ ပဲကျပ်ပျဉ်၊ ပဲနို့
စသည်တို့ထဲမှာ Genistien ဓာတ် အပြည့်အ၀ ပါရှိပါတယ်၊ မြေပဲ၊
လူဆန်ပဲပင်နှင့် ဒေါက်ခွရွက်တို့ထဲမှာလည်း အဲဒီဓာတ်သဘာဝတွေ တည်ရှိပါတယ်။
( ၉ ) လက်ဖက်
လက်ဖက်ရွက်၊ အထူးသဖြင့် ဂရင်းတီး လက်ဖက်ထဲမှာ လူကိုအကျိုးပြုရာ
ရောဂါတိုက်ဖျက်ပြီး ကျန်းမာမှုတိုးမြှင့် စေမယ့် Polyphenols ဓာတ်တွေ
ပါဝင်နေပါတယ်၊ အကယ်၍ ပုံမှန်ဆဲလ်တွေကနေ ကင်ဆာဆဲလ်အဖြစ် ကူးပြောင်းပြီး
ဆက်လက်ပွားတိုးလာတော့မယ့် အခါတွေမှာ Catechin ခေါ် ပိုလီဖီနောလ် ဓာတ်သဘာဝ
တွေကပဲ မပြန့်ပွားအောင် တားဆီးကာကွယ်ပေးတတ်ပါတယ်၊ ကင်ဆာအဖြစ်
ဖွဲ့စည်းပေးတော့မယ့် ကာစီနိုဂျင် တွေကိုလည်း တိုက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်၊
ဂရင်းတီးကို သောက်စရာအအေးအဖြစ် ဖန်တီးသောက်ခဲ့ရင် အာနိသင်
( ၁၀ ) ခရမ်းချဉ်သီး
လူကို ရောဂါတိုးပွားအောင် ဖန်တီးနေမယ့်် ပိုယ်ထဲက ဖရီးရယ်ဒီကယ်
အညစ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် ဗီတာမင်စီဓာတ်ဟာ ခရမ်းချဉ်သီးထဲမှာ
အများဆုံး ပျော်ဝင်နေတတ်ပါမယ်၊ ဗီတာမင်စီဟာ အသီးအရွက် အတော်များများမှာ
ပါဝင်နေပေမယ့် ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ထူးခြားတာတခုက Lycopene အဖြစ်
ပါဝင်တာဖြစ်တယ်၊ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တွေကို ဖယ်ရှားစေမယ့်
Pcoumaslic အက်ဆစ်နှင့် Chlorogenic အက်ဆစ်တို့လည်း ခရမ်းချဉ်သီး
နီနီထဲမှာ ပြည့်ဝစွာတည်ရှိနေပါတယ်၊ အလားတူ အဲဒီသဘာဝတွေကို ဖရဲသီး၊
စတော်ဘယ်ရီနဲ့ မုန်လာဥ၀ါ တို့ထဲမှာလည်း တွေ့နိုင်ကြောင်း
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:21 AM0comments
အလုပ်ကို မိုးချုပ်တဲ့ထိ အချိန်ပို လုပ်ပြီး မောမောနဲ့ အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။
ပင်ပန်းလို့ စိတ်တွေလဲ တိုနေတယ်။ ငါးနှစ်အရွယ် သူ့သားလေးက အိမ်ပေါက်ဝမှာ
သူပြန်အလာကို စောင့်နေတာ တွေ့ရတယ်။
သား - “ဖေဖေ၊ ဖေဖေ့ကို သားတစ်ခု မေးလို့ ရမလား”
ဖခင် - “မေးလေသားရဲ့၊ ဘာမေးမလို့လဲ”
သား - “ဖေဖေ၊ တစ်နာရီ အလုပ်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရလဲ”
ဖခင် - “ဒါ မင်းအလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာ ကိစ္စနဲ့ မင်းက သိချင်ရတာလဲ” ဖအေဖြစ်သူက
သား - “သားသိမှ ဖြစ်မှာမို့လို့ပါ ဖေဖေရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖေဖေ တစ်နာရီ
အလုပ်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရလဲ ဆိုတာသာ ဖြေပေးပါဗျာ”
ဖခင် - “အေး၊ မင်းသိမှ ဖြစ်မှာဆိုလဲ ဖြေရတာပေါ့ကွာ။ တစ်နာရီကို နှစ်ဆယ် ရတယ်”
“အိုး” ခလေးငယ်က ခေါင်းငုံ့ချလိုက်ရင်း ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်လိုက်မိတယ်။
နောက်တော့ ခေါင်းမော့ပြီး သူ့အဖေကို မရဲတရဲ ကြည့်ပြီး မေးလိုက်တယ်။
“ဖေဖေ၊ သား ပိုက်ဆံ တစ်ဆယ်လောက် ဖေဖေ့ဆီက ချေးလို့ ရမလား”
ဖခင်ဖြစ်သူက ဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ “မင်းဒီလိုမေးတာက ငွေချေးပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့
အရုပ်တွေ၊ တခြား အဓိပ္ပါယ် ဘာမရှိတဲ့ ဟာတွေ ဝယ်ဖို့ သက်သက်ပဲ ဆိုရင်
အခုချက်ချင်း မင်းအခန်းထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ် သွားနေ နေတော့။ မင်းကိုယ်မင်း အတ္တ
ကြီးလား မကြီးဘူးလား သေချာ ပြန်စဉ်းစား။ ငါ နေ့တိုင်း ဒီလောက် အလုပ်ကို
အပင်ပန်းခံ လုပ်နေတာ မင်းရဲ့ ခလေးဆန်တဲ့ ဒီ ပူဆာတာတွေ သက်သက် အတွက်ပဲလား”
ကောင်ကလေးလဲ သူ့အခန်းထဲ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်လေး ဝင်သွားပြီး အခန်းတံခါးကို
ပိတ်လိုက်တယ်။ အဖေကြီးကတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်နေရင်း သူ့သားရဲ့မေးခွန်းကို
စဉ်းစားမိလေ၊ ဒေါသထွက်လေ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီကောင်လေးက သူ့ဆီက ပိုက်ဆံ
တောင်းချင်တာကိုများ ဒီမေးခွန်း လာမေးနေရသေးတယ်။ နာရီပိုင်းလောက်ကြာတော့ သူလဲ
ဒေါသပြေသွားတယ်။သူ့သားက သူ့ဆီကနေ ငွေတောင်းခဲတယ်။ အခု ဒီငွေတစ်ဆယ် တောင်းတာ
သူ့သား တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ တစ်ခုခုကို ဝယ်ဖို့များလား လို့ စပြီး စဉ်းစား မိလာတယ်။
ဒါနဲ့ သူ့သား အခန်းထဲကို တံခါးခေါက်၊ ခွင့်တောင်းပြီး ဝင်သွားလိုက်တယ်။
“သား အိပ်နေပြီလား” သူ့သားကို ငြင်ငြင်သာသာ မေးလိုက်တယ်။
“မအိပ်သေးပါဘူး ဖေဖေ” သားက ပြန်ဖြေတယ်။
“စောစော က ဖေဖေ သိပ်ပြီးများ ဒေါသကြီး သွားသလား စဉ်းစားမိလို့ပါ” အဖေကြီးက
ချော့တယ်။ “ဖေဖေ ဒီနေ့ အလုပ်တော်တော် ပင်ပန်းလာလို့ စိတ်မရှည်နိုင်ပဲ သားကို
အော်ငေါက်မိသွားတယ်။ ရော့၊ ဒီမှာ သားလိုချင်တဲ့ ငွေတစ်ဆယ်”
သားကလေးလဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့ အိပ်ယာကနေ ငေါက်ကနဲ ထထိုင်လိုက်တယ်။ “အိုး၊
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဖေဖေရာ” အပြုံးမျက်နှာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အော်လိုက်တယ်။
နောက်တော့ ခေါက်ထားတဲ့ ငွေစက္ကူလေးတစ်ချို့ကို သူ့ခေါင်းအုံးအောက်ကနေ
အဖေကြီးက သူ့သားဆီမှာ ငွေတစ်ချို့ရှိနေပြီးသားဆိုတာ သိသွားတော့ ဒေါသတွေက
ကောင်ကလေးကတော့ သူ့လက်ထဲက ငွေတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရေတွက်ပြီး သူ့အဖေကို
“မင်းဆီမှာ ငွေတွေ ရှိနေပြီးသားကို ဘာလို့ ထပ်ပြီး လိုချင်နေရတာလဲ” သူ့အဖေက
ဒေါသသံနဲ့ အံကြိတ်ပြီး မေးတယ်။
“သားမှာ ငွေမလောက်လို့ပေါ့၊ ခုတော့ ပြည့်ပါပြီ” ကောင်ကလေးက ပြန်ဖြေတယ်။
“ဖေဖေ၊ ခု သားမှာ ငွေနှစ်ဆယ်ပြည့်ပြီ။ ဖေဖေ့ဆီက အချိန် တစ်ချို့ကို သား ဝယ်လို့
ရမလားဟင်။ မနက်ဖြန်ကျရင် ဖေဖေ အိမ်ကို စောစော ပြန်လာခဲ့ပါနော်။ သားလေ၊ ဖေဖေနဲ့
အတူတူ ညစာ စားချင်လို့ပါ”
ဒီပုံပြင်လေးကို သင်ချစ်ခင်တဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို မျှဝေပေးပါ။ ပိုကောင်းတာက
ငွေနှစ်ဆယ်တန်တဲ့ သင့်ရဲ့ အချိန် တစ်နာရီကို သင် ချစ်တဲ့ သူတွေအတွက်
ဒီပုံပြင်လေးက အလုပ်တာဝန်တွေ အမြဲ ဖိစီးပြီး မအားမလပ် ဖြစ်နေကြတဲ့
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် သိမ်မွေ့တဲ့ သတိပေးမှုလေး တစ်ခုပါ။
ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ အရေးပါတဲ့၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ သူတွေအတွက် ပေးရမဲ့ အဖိုးတန်
အချိန်တွေ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲကနေ ချွတ်ချော်ကျပြီး ပျောက်ဆုံးမသွားအောင်
တကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ မနက်ဖြန်လိုမှာ သေဆုံးသွားပြီ ဆိုပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ အခုအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကုမဏီက ရက်မကြာခင်မှာပဲ တစ်ခြား
လူတစ်ယောက်ကို အစားထိုး ခန့်လိုက်မှာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ချန်ရစ် ခံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ကတော့
အစားထိုး မရနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု အဖြစ် ခံစားကြရပါ့မယ်
forward mail ကရတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 5:06 AM0comments
လောကကြီးထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှကိစ္စအားလုံးက တစ်ခုကိုရရင် အခြားတစ်ခုကို
ဆုံးရှုံးရတာချည်းပဲ။ အချစ်က လူကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပေးသလို
ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကိုလည်း ပေးတယ်။ စည်းစိမ်ချမ်းသာခြင်းက လူကိုပျော်ရွှင်စေသလို
စိတ်မချမ်းမြေ့မှုတွေကိုလည်း ပေးတယ်။ အောင်မြင်ခြင်းက လူကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူစေသလို
မျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ပိုင်ဆိုင်ရတာဟာ
ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ အလားတူ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်
ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အဆအတိုင်း ပြန်ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- ရယူပိုင်ဆိုင်တုန်းက ၈မှတ်
ပျော်ရွှင်ခဲ့ရင် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း ၈မှတ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲလိမ့်မယ်။
လူတချို့က ပစ္စည်းဥစ္စာကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကျန်းမာရေး၊ မိသားစု
သို့မဟုတ် အချစ်ရေးမှာ ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်။ လူတချို့က စီးပွါးရေး၊
အောင်မြင်ရေးမှာ ၃မှတ်လျော့ခဲ့ပေမယ့် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့
ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုမှာ ၃မှတ်တိုးလာခဲ့တယ်။ တချို့အရာတွေက
မတရားဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် သေချာချင့်ချိန်ကြည့်ရင် တရားတာတွေချည်းပါပဲ။
ဆင်းရဲသားတစ်ဦးက ငွေရာကျော်လေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်တယ်။ အဲဒီဆင်းရဲသား
သူဌေးဖြစ်ပြီးနောက် တူညီတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ငွေထောင်သောင်းသုံးမှ ဒါမှမဟုတ်
သိန်းရာကျော်သုံးမှ သူရနိုင်တော့မယ်။ အရသာပြင်းပြင်းကြိုက်လေ
အဲဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အရသာက ညံ့လေလေဖြစ်တယ်။ ငွေကြေးများလေလေ အဲဒီငွေတွေရဲ့တန်ဖိုးက
သေးလေလေဖြစ်တယ်။ ဗိုက်အရမ်းဆာချိန်မှာ ပေါက်စီတစ်လုံးရဲ့ အရသာက
အရမ်းချိုမြိန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါက်စီငါးလုံးစားပြီးနောက် ပေါက်စီရဲ့
ချိုမြိန်တဲ့အရသာကို သင်ခံစားမိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ငွေများလေ သူခိုးဓမြရန်ကိုကြောက်လေ၊ အိမ်ကြီးလေ
ထိန်းသိမ်းလှဲကျင်းရမှာကြောက်လေ၊ များများစားတဲ့လူက ဝမှာကြောက်တယ်။
ကောင်းကောင်းစားရတဲ့လူက သေမှာကြောက်တယ်။ ဒါကြောင့် အခုခေတ် ချမ်းသာတဲ့လူတွေက
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံတွေ စားကြတယ်။ ပဲ၊ ပြောင်း၊ ဂျုံတွေကို
အဓိကထားစားကြတယ်။ အဲဒီအစားအစာတွေ အားလုံးက ဆင်းရဲတုန်းက စားခဲ့တဲ့အစာ ဒါမှမဟုတ်
တိရစ္ဆာန်တွေကို ကျွေးတဲ့အစာတွေ မဟုတ်ပါလား?
အားလုံးသိပြီဖြစ်တဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်က ဒီလိုဆိုပါတယ်။
မြေခွေးတစ်ကောင်ဟာ ခြံစည်းရိုးထဲက စပျစ်သီးကိုတွေ့တော့ အရမ်းစားချင်ခဲ့တယ်။
အပင်ထက်က စပျစ်သီးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် မြေခွေးဟာ ခြံထဲဝင်ဖို့
ဝင်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး စည်းရိုးနားက ဝင်ပေါက်တစ်ခုကို
သူတွေ့ခဲ့တယ်။ ဝင်ပေါက်ကသေးနေလို့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဝင်မရခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ မြေခွေးက
ဝင်ပေါက်သေးသေးလေးထဲ ဝင်ရဖို့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် သေးငယ်သွားအောင်
စည်းရိုးအပြင်မှာ(၆)ရက်ကြာ အဆာငတ်ခံခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး မြေခွေးဟာ
ခြံထဲဝင်နိုင်ခဲ့ပြီး စပျစ်သီးတွေကို အားရပါးရ စားသုံးခဲ့တယ်။ စားပြီးမှ
ပြည့်တင်းနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ ခြံအပြင်ထွက်ဖို့ မရမှန်းသိတော့ မြေခွေးဟာ (၆)ရက်ကြာ
ချောင်းအထက်ပိုင်းမှာ နေ့တိုင်းရေသောက်နေတဲ့ ရှဉ့်တစ်ကောင်နဲ့
ချောင်းအောက်ပိုင်းမှာ နေ့တိုင်းရေသောက်နေတဲ့ ရှဉ့်က ဘာမှမခြားနားဘူး။
ရှဉ့်တစ်ကောင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဘယ်လောက်ဆန့်မလဲ? ရေပိုသောက်တဲ့သူက
ဗိုက်ကားပြီး သေရုံကလွဲလို့ ဘာဖြစ်နိုင်ဦးမလဲ?
လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်အတွက်က
တစ်နေ့ထမင်းသုံးနပ်နဲ့ ညအိပ်ရင် ကုတင်တစ်လုံးပါပဲ။ ကုတင်အလုံးတစ်ရာ
ပိုင်တယ်ဆိုရင်တောင် ညအိပ်ရင် ကုတင်တစ်လုံးပဲ သင်အိပ်နိုင်မယ်။
ဖိနပ်အရံတစ်ထောင် ပိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ကြိမ်မှာ ဖိနပ်တစ်ရံပဲ
သင်စီးလို့ရမယ်။ ဟင်းအပွဲရာကျော်ကို သင်မှာနိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်
သင်ဘယ်လောက်စားနိုင်မလဲ? အလွန်ဆုံး အစာအိမ်တစ်ခုပဲ သင်ထည့်နိုင်မှာ မဟုတ်လား?
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် လူဘဝဆိုတာကို တွေ့ကြုံခံစားကြည့်ဖို့ပါပဲ။ လူ့လောကထဲ
ရောက်လာသူတွေအားလုံးမှာ ဥစ္စာ၊ ရာထူးတွေသာ အနိမ့်အမြင့်ဆိုပြီး
အဆင့်အတန်းခွဲထားကြမယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတော့
အနိမ့်အမြင့်ခွဲခြားလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ငွေရှိတဲ့လူရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းက
ပိုရှုပ်ထွေးမယ်။ ဆင်းရဲတဲ့လူရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ပိုရိုးရှင်းမယ်။ ဒီလောက်လေးပဲ
ကွာခြားပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ယောက်ျား ဒါမှမဟုတ် မိန်းမ
သင်ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ ဝမ်းနည်းခြင်းက တစ်နေရာမှာ ချောင်းမြောင်းနေလိမ့်မယ်။
ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းရဲ့နောက်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းက ထပ်ကြပ်မခွါလိုက်လို့နေတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ အရာရာတိုင်းက သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျ ဒွန်တွဲနေတယ်ဆိုတာကို
သင်သတိပြုမိလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်တာ ဝမ်းနည်းတာ၊ ပိုင်ဆိုင်တာ ဆုံးရှုံးတာ၊
ကောင်းတာ ဆိုးတာ၊ တိုးတာ လျှော့တာ နောက်ဆုံးရတဲ့ကိန်းက တူညီနေပါလိမ့်မယ်။
တချို့လူက အချိန်စောပြီး ရယူပိုင်ဆိုင်ရတယ်။ တချို့ကနောက်ကျမှ
ရယူပိုင်ဆိုင်တယ်။ တချို့က အချိန်စောပြီး လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရတယ်။ တချို့က
နောက်ကျမှ ဆုံးရှုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးရတဲ့ကိန်းက အတူတူပဲဖြစ်တယ်။
ရယူပိုင်ဆိုင်တုန်းက ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလောက် ဆုံးရှုံးချိန်မှာ
ဝမ်းနည်းရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး သေဆုံးချိန်မှာ လူတိုင်း၊ အရာတိုင်းက
တူညီသွားပါတယ်။ သေဆုံးခြင်းက အရာအားလုံးကို တရားမျှမျှ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးခြင်းမှာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ခွဲမထားပါဘူး။ ချမ်းသာတဲ့လူက
သက်တောင့်သက်သာသေရပြီး ဆင်းရဲသူက နာကျင်ခံစားပြီး သေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လူတချို့က (၁ဝ)မှတ်အပြည့်ရတယ်။ သူသေဆုံးထွက်ခွါချိန်မှာ (၁ဝ)မှတ်အပြည့်
ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ လုံးဝတရားပါတယ်။
အရင်ရသူက အရင်ဆုံးရှုံးမယ်။ နောက်ကျရသူက နောက်မှဆုံးရှုံးမယ်။ လုံးဝမရသူက
ဆုံးရှုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဘာအငြိုးအတေးမှ
မထားနဲ့။ သူမှန်တယ်၊ ငါမှားတယ်၊ သူညံ့တယ်၊ ငါတော်တယ်နဲ့
တွယ်ကပ်တွက်ချက်မနေပါနဲ့။ လူဘဝဆိုတာကို တွေ့ကြုံခံစားကြည့်ဖို့ပါပဲ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 8:01 PM0comments
ဘုရားရှင်လက်ထက်က အရှင်ပိယဉ္ဖဟထေရ် ရဲ့ ချစ်စရာ၊အတုယူစရာကောင်းတဲ့ ဘ၀နေနည်းလေးတွေပါ။ အရှင်ဟာ လိစ္ဆ၀ီမင်းမျိုးက ပေါက်ဖွားလာခဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ စစ်တိုက်တာ အလွန်ဝါသနာသန်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူရဲ့ ဘ၀မှာတော့ စစ်ပွဲတိုင်းကို အောင်နိုင်သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ၀ါသနာအရင်းခံရင်တော့ အောင်မြင်မှုရရှိတာ များပါတယ်။ ကြိုးစားအားထုပ်မှုလေးပဲ ရောထဲ့ပေးလိုက်ရုံပါ။ အရှင့်ဘ၀ရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာတော့ ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ ဆုံခဲ့လို့ရဟန်းဝတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ဟာ အရှင့်အတွက်လည်းလာခြင်းကောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လောကမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အားလုံးအတွက် မဟုတ်တောင်မှ မိမိရဲ့ မိသားစု၊ မိမိရဲ့ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်လေး အတွက်တော့ မိမိဟာ အပို၊အရှုပ်ထုပ် မဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မယ့်လာခြင်းကောင်း သူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ လည်းလိုပါတယ်။ အရှင်ဟာ ၀ိပသနာတရားကို ကြိုးစားအားထုပ်လို့ရဟန္တာ ဖြစ် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အရှင့်ရဲ့ ဘ၀သမိုင်း အကျဉ်းချုပ် ခပ်တိုတိုလေးပါ။ အခုပြောချင်တာက အရှင့်ရဲ့ ဘ၀ နေနည်း လေးတွေ အကြောင်းပါ။ မြင့်သူတွေထဲမှာ နိမ့်သူဖြစ်ပါတဲ့။ လောကမှာဘ၀င် မြင့်ကြသူတွေ မာနကြီးသူတွေ စသဖြင့် မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ မြင့်နေကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ မိမိက ဘ၀င်မမြင့် မာနမကြီးဘဲ နိမ့်ချတဲ့ စိတ်ထားနဲ နေရမှာပါ။ စပါးနှံလို အနှစ်ရှိလေနိမ့်လေဖြစ်ရမှာပါ။ နိမ့်သူတွေထဲမှာတော့ မြင့်သူဖြစ်အောင် နေရမယ်တဲ့။ လောကမှာ ပျင်းလို့ကြိုးစားအားထုပ်မှု မရှိလိုိ့စိတ်ဓာတ် မကောင်းလို့နိမ့်ကြသူတွေ ထဲမှာတော့ မိမိက ကြိုးစား အားထုပ်မှုစိတ်ဓာတ်မြင့် မြတ်အောင် လုပ်ယူပြီး စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူ၊ သဘေားထားကြီးသူ အဖြစ် မြင့်မြတ်သော ဘ၀ပိုင်ရှင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။ မနေသူတွေထဲမှာ နေပါတဲ့။ ကောင်းသောနေနည်း၊ အရိယာသူတော်စဉ်တို့ ရဲ့ နေနည်းတွေနဲ့မနေသူတွေထဲမှာတော့ မိမိက ကောင်းတာတွေနဲ့ပဲနေသူ၊ မကောင်းတာတွေကို အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစား ရှောင်ကြဉ်ပြီးနေသူ၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမ သြ၀ါဒအတိုင်း နေနိုင်သူ ဖြစ်အောင် နေရမှာပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ပျော်သူတွေထဲမှာတော့ မပျော်ပါနဲ့ တဲ့။ အပူပျော်ဖြစ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အာရုံတွေနဲ့ပျော်နေတဲ့ သူတွေထဲမှာ
မိမိပါလိုက်ပြီး မပျော်မိဘို့ ပါ။ တော်တော်များများက လောကီ၊လောကုတ္တရာနှစ်ဖြာ ဘာအကျိုးမှ မိမိအတွက် မဖြစ်စေတဲ့
အပျော်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ခံ၊ ငွေအကုန်ခံပြီး အကန်းပျော်၊ ပျော်နေကြတာပါ။ ပျော်စရာ အာရုံတွေ များလွန်းတဲ့ ခေတ်ကြီး
မှာ အပျော်တွေနဲ့ ကြီး ဘ၀ကို နိဂုံးမချုပ်မိဘို့လိုပါတယ်။ လူ့ ဘ၀ အချိန်ခပ်တိုတိုလေးမှာ တရားနဲ့ ပျော်ဘူးသူဖြစ်အောင်
တော့ ကြိုးစားကြရမှာပါ။ အရှင့်မိန့် ကြားခဲ့တဲ့ ဘ၀နေနည်း လေးတွေနဲ့ သာ အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား နေလိုက်မယ်
# Posted by မော်ကွန်းသစ် on ဒီဖင်ဘာ 31, 2009 at 1:21pm
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:33 PM0comments
(၁)ကျွန်တော်တို့က အစာသာစုဆောင်းတတ်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ်နဲ့ မတူသင့်ဘူး။ ဗိုက်ထဲကအမျှင်ကိုသာ ထွေးထုတ်တတ်တဲ့ ပင့်ကူလိုလည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဝတ်မှုန်ကိုစုပ်ယူ ကျေညက်အောင်ဝါးမျိုပြီးမှ မွှေးကြိုင်ချိုမြိန်တဲ့ ပျားရည်အဖြစ် ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ပျားတွေလို ကျင့်ကြံသင့်တယ်။
(၂) ဘယ်လိုအတွေးအခေါ်ရှိရင် ဘယ်လိုအပြုအမှုရှိမယ်။
(၃) စာအုပ်ကောင်းဆိုတာ ဆရာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတယ်။ ကိုယ့်ဘေးမှာအစဉ်ရှိပြီး ကိုယ့်ဘဝကို အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတွေနဲ့ ပြည့်စုံစေတယ်။ မကောင်းတဲ့စာအုပ်က ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းလိုပဲ ကိုယ့်အကျင့်၊ ကိုယ့်စရိုက်ကို ပျက်ပြားစေပြီး မှေးမှိန်တဲ့ဘဝလမ်းဆီ တွန်းပို့ပေးတယ်။
(၄) စင်ပေါ်(၃)မိနစ်အတွက် စင်အောက်မှာ(၁ဝ)နှစ် ကျင့်ရတယ်။ အဲဒီအောင်မြင်မှုက ကြိုးစားမှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကြိုးစားအောင်မြင်တဲ့လူကို ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းသာမှုတွေ ပေးသင့်တယ်။
(၅) "သတင်းကောင်းက အိမ်ထဲအောင်းနေချိန်၊ အတင်းက ကမ္ဘာပတ်ပြီးနေပြီ"
ထိခိုက်မှုတွေထဲမှာ အတင်းစကားနဲ့ ထိခိုက်တာလောက် နာကျင်တာမရှိဘူး။ ကိုယ့်ပါးစပ်မဟခင် စဉ်းစားချင့်ချိန်ပါ။ ပါးစပ်ကထွက်မယ့်စကားတွေ ဦးနှောက်ကိုအရင်ဖြတ်ပါစေ။
(၆) "တောင်တွေကို ရွေ့လျားဖို့လွယ်ပေမယ့် အကျင့်စရိုက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲတယ်"
မကောင်းတဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူမိပြီးရင် ပြုပြင်ဖို့ ခက်သွားတတ်တယ်။ ခက်တယ်ဆိုတာကလည်း လူတွေက ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ်မမြင်တတ်ကြလို့ပါပဲ။
(၇) "ကိုယ့်အတွက်" လို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့တစ်ပြိုက်နက် တစ်ဖက်လူရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်တယ်။ သူ့အတွက် ပိုစဉ်းစားပေးသင့်တယ်။ ဒါတွေက ကြင်နာ၊ ယဉ်ကျေးတဲ့အပြင် တစ်ဖက်လူကို လေးစားရာလည်းရောက်တယ်။ လင်မယားကြားမှာ ဒါကိုပိုအလေးထားသင့်တယ်။
(၈) လူ့ဘဝမှာ နေသာရက်၊ မိုးအုံ့ရက်တွေရှိတယ်။ နေသာတယ်ဆိုတိုင်း အမြဲတမ်းနေသာနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေ မိုးကြီးလေကြီးလည်း ကျတတ်တယ်။ မိုးမိသွားတဲ့လူကို လက်ညှိုးထိုး ဟားတိုက်မရယ်ပါနဲ့။ ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးလိုက်ပါ။
(၉) စကား၊ စာလုံးတွေက စာအုပ်အဖြစ် ပုံနှိပ်ပြီးရင် အသေဖြစ်သွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် လူ့ဦးနှောက်က ရှင်နေသေးတယ်။ သေနေတဲ့ စကား၊ စာလုံး၊ နည်းလမ်းတွေကို ရှင်နေတဲ့ ကိုယ့်ဦးနှောက်ထဲ သွတ်သွင်းပါ။
(၁ဝ) အောင်မြင်လိုစိတ်၊ ကြီးပွားလိုတဲ့ဆန္ဒတွေက ကူးစက်နိုင်တယ်။ အဲဒါတွေကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်မှာ ကူးစက်ထားပါစေ။ အဲဒါတွေက ကိုယ်သွားရာလမ်းက ဆူးညှောင့်ခလုတ်၊ အဖျက်အဆီးတွေကို ချေဖျက်ပေးပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို အရောက်ပို့ပေးမယ့် အရာတွေဖြစ်တယ်။
# Posted by အောင်ကျော်ဇေယျာမိုးဟိန်းထွန်း on January 6, 2010 at 5:10pm
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:21 PM0comments
src="http://3.bp.blogspot.com/_IPl5Bd2XBR8/S0SFgxth4TI/AAAAAAAAAtk/aZp-wjTC_d0/s320/Img00021.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5423606649407529266" />
To show that they are adults and mature.
ကျနော် ဒီပုံတွေကိုတွေ့တော့ သိပ်ခံစားရတယ်။ အသိဥာဏ် အကြီးမားဆုံးလို့ ပြောနေတဲ့ လူသားတွေက အသိဥာဏ်အမဲ့ဆုံး အလုပ်တွေကို လုပ်နေကြပါလားလို့ သံဝေဂ ရမိတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းတဲ့လူတွေ (အဲဒီလူတွေထဲမှာ ကျနော်လည်း အပါအဝင်) နားလည်ပြီး ဖတ်လို့ရအောင် တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှားပါရင်လည်း စေတနာအမှားလို့ နားလည်ပေးပါ။ မှားခဲ့ရင် တကယ်တတ်တဲ့လူတွေက ထပ်ပြင်ပေးကြပေါ့။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအတွက် သိပ်ကို ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တခုပါ။
သဘာဝ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လို့ ပင်လယ်ပြင်ကြီး အနီရောင်တွေ စွန်းထင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
လိမ္မာပြီး ဥာဏ်ရှိ ယဉ်ပါးတဲ့ လင်းပိုင်ရာပေါင်းများစွာကို အသိဥာဏ်တွေရော နည်းပညာတွေပါ တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ လူသားတွေက ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်လိုက်လို့ သူတို့ရဲ့သွေးတွေနဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီး နီစွေးနေတာပါ။
ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်က ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဖဲဖိုးကျွန်းမှာ နှစ်စဉ်ဖြစ်နေကျပါ။ ဒီလိုမျိုး လင်းပိုင်တွေကို သတ်တဲ့ပွဲမှာ လူငယ်အဖွဲ့တွေက အဓိကပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ အရွယ်ရောက်ကြောင်းကို ပြသဖို့ အတွက် လင်းပိုင်တွေကို သတ်ပြဖို့ လိုအပ်တယ်လေ။
ဒီပွဲကြီး ကျင်းပနေဆဲအချိန်တော့ ဘယ်သူမှ အပေါင်းအသင်းကို သတိရလေ့မရှိဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ်တိုင်သတ်ရင်သတ် ဒါမှမဟုတ် တခြားလူနဲ့ပေါင်းပြီး သတ်၊ မသတ်ရဲတဲ့လူက သူများသတ်တာကို ဘောလုံးပွဲလိုပဲ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်လေ့ရှိကြတယ်။
လင်းပိုင်ဆိုတာ လူတွေနဲ့အတူနေပြီး ဆော့ကစားဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူသားတွေရဲ့ ဖြူစင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ ပြောဖို့ လိုသေးသလားဗျာ။
သူတို့ကို သတ်တဲ့အချိန်မှာ ချက်ချင်း မသေကြပါဘူး။ လူတွေက သံမဏိအချွန်ကြီးတွေနဲ့ တချက်ပြီးတချက် ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာ လင်းပိုင်တွေဟာ မွေးကင်းစကလေးတွေငိုတဲ့အသံနဲ့ ညီးတွားအော်ဟစ်နေကြတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကလူတွေဟာ ဝေဒနာခံစားနေတဲ့လင်းပိုင်ကိုတော့ အသေသတ်လေ့မရှိဘဲ သူတို့ရဲ့သွေးရဲရဲတွေကြားမှာပဲ တဖြည်းဖြည်း သေအောင် ထားလိုက်ကြတယ်။
ဒီလောက်ဆို တော်လောက်ပါပြီ။ ဒီမေးလ်ကို ဖတ်ရုံဘဲ မလုပ်ပါနဲ့ သနားစရာ အပြစ်မဲ့တဲ့ တိရိ စ္ဆာန်တွေကို သတ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်ကြီး ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေး ကာကွယ်တဲ့ အဖွဲ့ထိရောက်သွားအောင် ဒီမေးလ်ကို ဆက်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။
ကမ္ဘာဟာ မင်းရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်ပါ။ စောင့်ရှောက်ပါ။
တကယ်တော့ လူသားတွေဟာ အသိဥာဏ် အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် အသိဥာဏ်နည်းပါးတဲ့ သတ္တဝါတွေကို စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အန္တရာယ်မပေးဘဲ အေးအေးဆေးဆေး နေတဲ့သတ္တဝါကို ဘာသာတရား အဆုံးအမအရ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အဆုံးအမအရ မသတ်ဖြတ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်အသားဆိပ်ရင် နာတတ်သလို သူ့အသားဆိပ်ရင်လည်း နာမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ အဆင့်မြင့်တဲ့လူသားတွေ ထားအပ်တဲ့တရားပါ။
တကယ်လို့သာ ဒီနေရာမှာ လင်းပိုင်တွေမဟုတ်ဘဲ လူသားစား ငမန်းတွေသာဆို ဒီလူတွေ ဒီလိုလုပ်ရဲပါ့မလား။ စဉ်းစားစရာပါနော်။ တွေးကြည့်တတ်ဖို့ပါ။ သူ့အလှည့်ကျတော့ အသေအကြေလုပ် ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ နာမှာကြောက် သေမှာကြောက်တဲ့ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ စိတ်မျိုး မမွေးကြပါနဲ့။ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ လူသား ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောရရင် ဒီဓာတ်ပုံထဲက လူတွေလို မရက်စက်ကြပါနဲ့။
ကမ္ဘာမြေဟာ မင်းရဲ့အိမ်ပါ သူငယ်ချင်း။ ကမ္ဘာမြေကို ဖျက်ဆီးခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းပါပဲ။
နောက်ပြီး ဒီလို အဓိပါယ်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေ ရပ်တန့်သွားဖို့ တထောင့်တနေရာက ကြိုးစားပေးလိုက်ပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ မလုပ်ရင် ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်ရင် အဓိပါယ်ရှိတဲ့ အုလုပ်ကို လုပ်ပါ။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားတတ်ကြပါစေ
ဦးဇင်းလေး ပို့ပေးတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 4:29 AM0comments
နယ်စပ်လမ်းက ဝမ်းတထွာ ၉-ခိုင်မာကျော်ဇော-ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၉
ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့ဟာ ငါးလုပ်ငန်းနဲ့ နံမည်ကျော်တဲ့ မြို့တမြို့ဖြစ်ပြီး ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကင်းမုံတွေကို နိုင်ငံခြား ပို့ကုန်ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ငါးပုဇွန်စက်ရုံများစွာရှိတဲ့ မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရနောင်းမြို့မှာ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွေကလာပြီး ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ဖက်စပ်တည်ထောင် ထားတဲ့ ငါးပုဇွန် စက်ရုံတွေရှိပြီး အဲ့ဒီငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေမှာ စံချိန်မှီ နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ငါး၊ ပုဇွန်တွေဖြစ်အောင် ပုဇွန် တွေကို ခေါင်းချိုး၊ အခွံချွတ်၊ ကျောခွဲ၊ သန့်စင်၊ ငါးတွေကို အညစ်အကြေးထုတ်၊ ဖြတ်တောက်၊ ချိန်တွယ်၊ ထုပ်ပိုးရတဲ့ အလုပ်တွေကို နေ့စားလရှင်းလုပ်ကိုင် နေကြတာက မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးငယ်တွေများပါတယ်။
ငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေဟာ လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာစကား မတူတဲ့ ထိုင်းအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လက်အောက်မှာ အစစအရာရာ သတိရှိရှိနဲ့ ဝမ်းကြောင်းနေကြရ တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုရင် အထင်အမြင် သေးတတ်ကြ၊ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်ချင်ကြတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်း သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ ငါးပုဇွန်စက် ရုံတွေထဲမှာလည်း ရှိနေကြတာပါ။
ငါးပုဇွန်စက်ရုံထဲက ထိုင်းအလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တချို့ဟာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်ချိန် မှာ၊ လုပ်ငန်းဂွင်ထဲမှာသာမက မိန်းကလေးတွေ စုပြီးဌားရမ်းနေထိုင်တဲ့ အိမ်တွေအထိ အိနြေ္ဒသိက္ခာမဲ့ အောင်လိုက်ပြီး နှောက်ယှက်တာတွေရှိပါတယ်။
“သဘာဝအရ စတာပြောင်တာကို ကျမတို့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေက ကျမတို့ မခံနိုင်ဘူး။ သူတို့ စော်ကားကို မခံတော့ အလုပ်ထဲမှာ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ ဒဏ်ပေးတယ်။ အညစ်အကြေးထုတ်တာ မစင်ဘူး၊ အခွံခွာပြီးတဲ့ ပုဇွန်ထဲမှာ ဆံပင်ချည်တွေ့တယ်ဆိုပြီး ရေခဲတုံးကြီးတွေပေါ်မှာ ရပ်ခိုင်းတာ၊ ရေခဲတုံးကြီး တွေကို ရွက်ခိုင်းတာတွေလုပ်တယ်” လို့ ပုဇွန်စက်ရုံတခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မသန်းအေးက ပြောပါတယ်။
ဒီလို ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကို ခံခဲ့ရသူက မသန်းအေးရဲ့ သူငယ်ချင်း ချိုချိုဝင်းပါ။ ဒါကို မသန်းအေး မမေ့နိုင်သလို သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူကို အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီး လူပုံအလယ်မှာ အပြစ်ပေးခဲ့၊ အရှက်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအလုပ် သမားခေါင်းဆောင်ကိုလည်း ဒီနေ့ထက်ထိ သူ မုန်းတီးနေဆဲပဲလို့ မသန်းအေးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်က ချိုချို့ကို မတရားအပြစ်ပေးတာကို မသန်းအေးတို့စက်ရုံက အလုပ်သမားတိုင်းသိ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အငြိုအငြင်ခံရမှာကို စိုးလို့။ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာမှာကို ကြောက်လို့၊ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး သူတို့ကိုပါ အလုပ်ထုတ်ပစ်မှာကို စိုးရိမ်လို့ သူတို့ ဘယ်သူကိုမှ မတိုင်ရဲ၊ မပြောရဲကြဘူးလို့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေက ပြောကြပါတယ်။
ငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ တဝမ်းစား တခါးဝတ် အတွက်သာမက သူတို့ရဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက်ပါ တဖက်တလမ်းကနေ ပုခုံးထမ်းနေကြရတာမို့ အလုပ် သမားခေါင်းဆောင်တွေ၊ အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ပြဿနာမဖြစ်အောင်၊ အလုပ်မပြုတ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကြ ပါတယ်။
“ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအပေါ် ဒီလိုလုပ်တာ မတရားမှန်းသိပေမယ့် ဒီမှာက မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ကူညီတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ ပြောလို့ တိုင်လို့ရတဲ့ နေရာတွေ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ ထိပ်တိုက်မတိုးအောင်ပဲ သတိထား ရှောင်ကြတာ များတယ်”လို့ ထိုင်းနဲ့ကိုးရီးယားပိုင် စက်ရုံတခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝေဝေက ပြောပါတယ်။
ဝေဝေဟာ ခေတ်ပညာတတ် အမျိုးသမီးငယ် တယောက်ပါ။ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်း ကြောင့် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ပညာရေးကိုရပ်ဆိုင်းပြီး အစ်မဖြစ်သူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ရနောင်းမြို့ကို ရောက် လာသူပါ။ ဝေဝေ အလုပ်က အအေးခန်းထဲမှာ ပုဇွန်တွေကို အခွံချွတ်၊ ကျောခွဲတဲ့ အလုပ်ပါ။ အအေးခန်းကြီးထဲမှာ တနေကုန် မတ်တပ်ရပ်ပြီး လုပ်ရတဲ့ ဒီအလုပ်ကို ဝေဝေ သဘောမကျပါဘူး။
“ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ညီမ ဒီအလုပ်ကို မလုပ်ချင်ဘူး။ ဒီအလုပ်က အအေးခန်းကြီးတွေထဲမှာ မနက်(၈)နာရီ ကနေ ညနေ(၈)နာရီအထိ တနေကုန် မတ်တပ်ရပြီး လုပ်ရတာ။ ပင်လည်း အရမ်းပင်ပမ်းတယ်။ အေးလည်း အရမ်း အေးတော့ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်”လို့ ဝေဝေ က ပြောပါတယ်။
သူတို့အလုပ်က ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ခွင့်ယူရင်လည်း (၂)ရက်ထက်ပိုပြီး မရပါဘူး။ ခွင့် ၃-၄ရက် ပျက်လို့ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေလည်း ငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အလုပ် လုပ်ဖို့လာကြ၊ အလုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရမယ်။ ပိုက်ဆံရမှ အလုပ်သမားလက်မှတ်ခ၊ အခန်းဌားခ၊ စားဖို့သောက်ဖို့၊ မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကို သိနေကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကလည်း အကြောင်းမဲ့ အလုပ် မပျက်ချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ် ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ လုံလောက်တဲ့ ခွင့်ရက်ကို သူတို့ ရချင်ကြပါတယ်။
ဝေဝေကတော့ ဒီအလုပ်ကို သူ (၃)နှစ်လောက်ပဲ လုပ်မယ်။ ပြီးရင် ဘန်ကောက်တက်ပြီး အဆင်ပြေမယ့် အလုပ် တခုကို ရှာလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝေဝေလိုပဲ ငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေထဲက အအေးခန်းကြီးတွေထဲမှာ မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်နေကြသူတွေ၊ အချိန်တိုပဲ လုပ်မယ်၊ အလုပ်သစ် ရှာမယ်လိုပြောပြီး ငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေ တရုံပြီးတရုံပြောင်း လုပ်နေကြသူတွေ ရနောင်းမြို့မှာ အများကြီးပါ။ တချို့ လည်း ဒီအလုပ်ကို မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး မြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီးမှ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် ငါးပုဇွန်စက်ရုံတွေထဲ ပြန်ရောက်လာကြသူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
# Posted by aung myo on ဒီဖင်ဘာ 30, 2009 at 11:00am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 5:00 AM0comments
(ဦးဇင်း)ဦးသုတေသန ပို့ ပေးတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:22 AM0comments
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် (ပါဠိ-မြန်မာ)
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:59 AM0comments
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:55 AM0comments
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:37 AM0comments
ကျွန်တော်လည်းforword mail ထဲကရတာကိုမျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
မင်္ဂလာဆောင်စတုန်းက သူမချမ်းသာဘူး။ သူမနဲ့အတူ အိမ်အိုတစ်လုံးမှာ
သူတို့နေခဲ့ကြတယ်။ သူမက မြောက်အရပ်ကလာသူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်
အေးခဲတဲ့ဆောင်းဒဏ်ကို အခန်းထဲက အနွေးဓာတ်နဲ့ အံတုတဲ့အကျင့်
သူမမှာပါခဲ့တယ်။ ဒီအိမ်အိုမှာ အနွေးပေးစက် မရှိဘူး။ လေမလုံဘူး။
မကြာပါဘူး.. သူမအပြင်းဖျားခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ကုတင်ဘေးမှာထိုင်ပြီး သူ့ရင်တွေ
နာကျင်ခဲ့ရတယ်။ （picture from google search)
အဖျားသက်သာခဲ့ပေမယ့် အိပ်ရာမဝင်ခင် သူမခြေထောက်ကို
ဆေးကြောပေးတတ်တဲ့အကျင့် သူမှာကျန်ခဲ့တယ်။ အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့
ရေနွေးပူပူထဲ သူမခြေထောက်ကို စိမ်ပေးတတ်တယ်။ ဖွဖွလေး၊ ညင်ညင်သာသာလေး၊
သူမခြေထောက်ကို သူနှိပ်နယ်ပေးတတ်တယ်။ ခြေထောက်တစ်စုံကို ဆေးကြောနေတယ်လို့
သူ မမြင်ဘဲ အဖိုးတန်တဲ့ကြွေထည်တစ်ခုကို ကိုင်တွယ်နေတယ်လို့ သူထင်ခဲ့တယ်။
သူမခြေထောက်ကို ဆေးကြောပေးပြီးရင် အဝတ်ခြောက်အောင် သူသုတ်ပေးတတ်တယ်။
ပြီးမှအေးစက်တဲ့ လက်ကျန်ရေနဲ့ သူ့ခြေကိုဆေးခဲ့တယ်။ ရေအေးတွေကိုပူသယောင်
သူ့ခြေရေရဲ့အပူချိန်ကို မစမ်းကြည့်လည်း သူမသိနေခဲ့တယ်။ သူမကို သူအဲဒီလို
ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ချစ်ခဲ့၊ ကြင်နာခဲ့တယ်။
ဆောင်းတွင်းမှာ တစ်ပတ်၂ကြိမ် သူမရေချိုးတတ်တယ်။ သူလည်းသူမလို
အကျင့်လုပ်ထားပြီး သူမ မချိုးခင် အရင်လုချိုးတတ်တယ်။ သူချိုးပြီးမှ
သူမချိုးရတယ်။ တစ်နေ့မှာ တီဗွီကလာတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကို ကြည့်ဖို့
သူမရေအရင်ချိုးချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို သူလက်မခံဘူး။ အချိန်အတိကျနဲ့ လာတဲ့
အစီအစဉ်ကိုကြည့်ဖို့ သူမရေအရင်ချိုးမယ့် ကိစကို
သူခါးခါးသီးသီးငြင်းခဲ့တယ်။ သူအရင်ချိုးမယလို့ မျက်နှာတည်နဲ့ပြောပြီး
သူမလက်ကို သူဆွဲလိုက်တဲ့အချိန် အားနည်းနည်းပါသွားတယ် ထင်ပါရဲ့....
သူမမျက်ရည်ဝဲတဲ့အထိ နာကျင်သွားခဲ့ရတယ်။ အရင်တုန်းက ဘာကိစ္စမဆို သူမကိုသူ
လိုက်လျောခဲ့တာချည်းပဲ။ အခု သူမရေအရင်ချိုးမယ်ဆိုတဲ့ အသေးအမွှားကိစ္စမှာ
သူဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ခါးသီးနေခဲ့မှန်း သူမနားမလည်ခဲ့ဘူး။ သူမှာငွေမရှိ၊
ရွှေမရှိလည်း ရှိသမျှနဲ့ပုံအောချစ်မယ်လို့ သူမကို သူပြောခဲ့ဖူးတယ်။
သူမတစ်သက်မှာ နားဝင်အချိုဆုံးစကားမို့ အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်
အချိန်နဲ့အမျှ အဲဒီစကားတွေက အချိုးပြောင်းခဲ့ပြီလား?
စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သူမကို သူချောမော့ခဲ့တယ်။ ဘာမဆို သူမသဘောအတိုင်း
ဖြစ်ရမယ်ဆိုပေမယ့် သူပဲရေအရင်ချိုးခဲ့တယ်။ အချိန်ကြာတော့ သူနဲ့ပြိုင်ပြီး
ရာသီတစ်ပတ်လည်ပြီး ဆောင်းကုန်လို့ နွေရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လုံးက ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်ပေါင်းထားသလား ထင်ရအောင်
ပူပြင်းခဲ့တယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာလို ရေနွေးနဲ့ခြေ မစိမ်တော့ဘဲ
ရေနေ့တိုင်းချိုးရတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ရေချိုးချိန်ရောက်တိုင်း
ဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်၊ သတင်းကြည့်မယ်နဲ့ သူအချိန်ဆွဲပြီး
သူမကိုအရင်ချိုးခိုင်းခဲ့တယ်။ အရင်ကလို သူပြီးမှသူမ ချိုးရတဲ့အစီအစဉ်ကို
တစ်နေ့မှာ သူ့ညီငယ်တစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်အသစ်ဆီ
သူတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအိမ်မှာလည်း အနွေးပေးစက်မရှိခဲ့ဘူး။
ညီအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ ရေချိုးခန်းကို သူအရင်သွားကြည့်ခဲ့တယ်။
အခန်းကိုပတ်ကြည့်ပြီး ညီငယ်ကို... "အိမ်အသစ်က အိမ်အဟောင်းထက်
ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုဘူး။ အနွေးပေးစက်မရှိလည်း လေကလုံတယ်။ ဒါပေမယ့်
မိန်းမတွေက အအေးမိမှာ ကြောက်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။
ဆောင်းတွင်းရောက်ရင် မင်းရေအရင်ချိုး.... ဒါမှရေချိုးခန်းက အေးစက်မနေမှာ။
ငါစမ်းကြည့်ဖူးတယ်... ရေချိုးပြီးရင် အေးစက်တဲ့အခန်းက အပူချိန်၁ဒီဂရီ
"ဒီလိုဆိုရင် နွေရာသီမှာ မိန်းမကိုအရင်ချိုးခိုင်းရမယ်။ ဒါမှ
အရင်ချိုးတဲ့လူက နောက်မှချိုးတဲ့လူထက် ၁ဒီဂရီအေးမြမယ် မဟုတ်လား အစ်ကို!"
ညီငယ်အမေးကို သူပြုံးပြီး ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။
သူတို့အပြောကို သူမကြားသွားခဲ့တယ်။ သူမ မျက်ရည်ဝဲတဲ့အထိ ခံစားခဲ့မိတယ်။
ကိုယ့်ကိုလည်း တုံးအတယ်လို့ သူမအပြစ်တင်မိတယ်။
အိမ်အဟောင်းမှ အိမ်အသစ်၊ အနွေးပေးစက် မရှိတဲ့အိမ်မှ
ရှိတဲ့အိမ်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် သူကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအကျင့်ကို
သူလုံးဝမဖျောက်ခဲ့ဘူး။ သူ့အကျင့်ရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သူမ
တစ်ညမှာ သူ့အတွက် သူမပထမဆုံးအကြိမ် ခြေဆေးရေထည့်ပေးခဲ့တယ်။
မငြင်းသာတဲ့အဆုံး သူငြိမ်ခံခဲ့တယ်။ သူ့ခြေထောက်ကို ပွတ်သပ်ဆေးကြောပေးမှ
သူခြေဖဝါးအောက်က မာကျောနေတဲ့ အသားမာတွေကို သူမစမ်းခဲ့မိတယ်။ ဒီအိမ်အတွက်၊
ဒီမိသားစုအတွက်၊ ကြင်နာနွေးထွေးမှုတွေအတွက် သူပင်ပန်းခဲ့တယ်။ သူမကတော့
၁ဒီဂရီရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သူမ မပြောခဲ့သလို ဘယ်သူရေအရင်ချိုးမယ်ဆိုတဲ့
အစီအစဉ်ကိုလည်း မကန့်ကွက်ခဲ့တော့ဘူး။ ဒါတွေဟာ သူမကိုချစ်တဲ့
သူ့အကြင်နာတွေ၊ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူမကို သူဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း
ဆောင်းမှာ သူမအတွက် အပူချိန်၁ဒီဂရီကို သူတိုးပေးခဲ့သလို နွေမှာသူမအတွက်
အပူချိန်၁ဒီဂရီကို သူလျော့ပေးခဲ့တယ်။ ၁ဒီဂရီ နွေးထွေးမှုလေးပါပဲ...
ဒါပေမယ့် အဲဒီနွေးထွေးမှုထဲမှာ ၁ဝဝဒီဂရီအပြည့် အချစ်တွေပါခဲ့တယ်.....
www.netbirds.com သတင်းစာထဲကပါပဲ။ အင်္ဂလန်မှာတုန်းက
ဖတ်မိခဲ့တာတွေကိုကြိုက်လို့ ဖြတ်ယူခဲ့တဲ့သတင်းစာ အပိုင်းအစတွေထဲကပါ။
# Posted by Mr.Leon on September 25, 2009 at 1:18pm
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 5:14 AM0comments
Thai Standard Time
A Ti Fu Cu
Download Someone Who Will Love You in All Your Damaged Glory: Stories PDF PDF
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ကဏ်ဍစုံမှပါဝငျပတျသကျသူမြား တှဆေုံ့
DR. SUBASHINI R. GANDHI
Uploads by DVBtelevision
ကျွန်တော် တို နဲ အရောင် များ - .:Be Happy:.